ရှင်းအာအိုးမိုရိဘူတာမှ ဇိုင်းရိုင်းလိုင်းဖြင့် ၃၀ မိနစ်ခန့် ။ ပန်းသီးထွက်ရှိနှုန်းပမာဏ ဂျပန် နံပါတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ အာအိုးမိုရိခရိုင် ( ဟီရိုးစခိမြို့ ) ။
မြို့ကို လမ်းလျှောက်လိုက်ရင် တွေ့ ရမယ့် ပန်းသီး စာတိုက်နဲ့ ခေတ်ဟောင်း အနောက်တိုင်းခန်းမဆောင်တွေကို အစပြုပြီး လေးရာသီပတ်လုံး လှပတဲ့ ဟီရိုးစခိရဲတိုက်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်က ဦးတည်ရာမရှိ လမ်းလျှောက်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဟီရိုးစခိကို ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့် ၆ ခု နည်းလမ်းကို ပြောပြပါမယ်။
ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့်နည်လမ်း ၁ ။ နတ်သမီးပုံပြင်ထဲရောက်သွားသလို ခေတ်ဟောင်း ဥရောပခန်းမဆောင်လည်ပတ်ခြင်း။
သိပ္ပံပညာမြို့တော်ကို ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဟီရိုးစခိမြို့ဖြစ်တယ်
မဲအိဂျိခေတ်မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပညာရေးအတွက် များစွာသော နိုင်ငံခြားလူမျိုးကျောင်းဆရာတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကို စိတ်အားထက်သန်စွာ ယူသွင်းလာတဲ့ အတွက် မဲအိဂျိမှ တိုင်းရှောခေတ်ထိ ဆောက်လုပ်လာခဲ့တဲ့ ဥရောပခန်းမဆောင်တွေ အများကြီးကျန်ရှိပါတယ်။
▲အနီရောင်ခန်းမဆောင်ပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ အမိုးနဲ့ အစိမ်းရောင်ပြတင်းပေါက်၊ အဖြူရောင်နံရံရဲ့ ထင်ရှားမှုက လှပတဲ့ ဟီရိုးစခိအစိုးရပိုင်စာကြည့်တိုက်。
【နေရာ 】အာအိုးမိုရိခရိုင် ၊ ဟီရိုးစခိမြို့၊ ရှိမိုရှိရိုးဂနဲချော ၂ -၁
【အလုပ်ချိန် 】၉း၀၀ မှ ၁၇း၀၀
▲တစ်ကျော့ပြန်ခေတ်စားလာတဲ့ ပုံစံဖြစ်တဲ့ ခေါက်ချိုးညီစတိုင်က ဆန်းကြယ်တဲ့ အာအိုးမိုရိဘဏ်အထိမ်းအမှတ်ခန်းမဆောင်။
【နေရာ 】အာအိုးမိုရိခရိုင် ၊ ဟီရိုးစခိမြို့၊ မိုတိုနာဂချော ၂ ၆
【ဝင်ကြေး 】လူကြီး ၂၀၀ ယန်း၊ မူလတန်း အလယ်တန်းကျောင်းသား ၁၀၀ ယန်း
【အလုပ်ချိန် 】 ၉း၃၀ မှ ၁၆း၃၀
▲ခရိုင်တွင်း အစောဆုံး ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ အရှေ့ ပိုင်းကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှာ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဆရာတွေရဲ့ အဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရှေ့ ပိုင်းကိုယ်ပိုင်ကျောင်းဟောင်း နိုင်ငံခြားသားဆရာများခန်းမဆောင်။
ပထမထပ်က ကော်ဖီဆိုင်မှာ မဲအိဂျိခေတ်ကို အချိန်ပြောင်းရောက်ရှိသွားသလို ဂန္တဝင်ဆန်တဲ့ ခန်းမမှာ တူဖြင့် စားနိုင်တဲ့ ပြင်သစ်အစားအစာနဲ့ အချိုပွဲကို ခံစားသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်နော်။
【နေရာ 】ဟီရိုးစခိမြို့၊ ရှိမိုရှိရိုးယာနဲချော ၂ - ၁
【အလုပ်ချိန် 】၉း၀၀ မှ ၁၈း၀၀ ( လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ၉း၃၀ မှ ၁၈း၀၀ )
မြို့ကို လမ်းလျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ လှတဲ့ ဥရောပခန်းမဆောင်တွေ အပြည့်ဘဲ။ ရဲတိုက်မြို့ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ခေတ်ဟောင်းခေတ်ပေါ် ဥရောပခန်းမဆောင်တွေ တန်းစီနေပြီး ၊ ဂျပန် ဥရောပရောစပ်ထားတဲ့ ဟီရိုးစခိယဉ်ကျေးမှုကို ခံစားကြည့်ရအောင်။
မြို့ကို လမ်းလျှောက်သွားရင် ပန်းသီးကို လုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မြေအောက်တွင်းဝင်ပေါက်အဖုံးနဲ့ လမ်းမှန်ကွေး စတဲ့ ၊ ဟီရိုးစခိပုံပေါ်တဲ့ ပန်းသီးကို အသုံးပြုထားတဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေ မြင်တွေ့ နိုင်တာလည်း ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါဘဲ။
အတွင်းမှာလည်း ခန့် ညားထည်ဝါတဲ့ နီရဲနေတဲ့ ပန်းသီးကို တင်ထားတဲ့ စာတိုက်က အရမ်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် ! ဟီရိုးစခိဘူတာနဲ့ ဟီရိုးစခိရပ်ကွက်ရုံး၊ ပန်းသီးပန်းခြံ စတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိတဲ့ ပန်းသီးစာတိုက်ကို ရှာဖွေပြီး ဆက်ဆက်ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါနော်။
ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း ၃ ။ လေးရာသီပတ်လုံး အံ့မခန်းလှပတဲ့ ( ဟီရိုးစခိပန်းခြံ ) ကို လမ်းလျှောက်မယ်။
နွေဦးက ဆာကူရာ၊ နွေရာသီက ကြာပန်း၊ ဆောင်းဦးက မိုမိဂျိ၊ ဆောင်းရာသီက နှင်းရှုခင်းတွေနှင့် လေးရာသီပတ်လုံး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဟီရိုးစခိပန်းခြံဖြစ်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဟီရိုးစခိပန်းခြံက စိတ်အလှုပ်ရှားရဆုံးက နွေဦးဆာကူရာပန်းရာသီဖြစ်တယ်။ ဂျပန် နံပါတ်တစ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့ ဟီရိုးစခိရဲ့ ဆာကူရာပန်း။ အဲဒီထူးခြားမှုက ပန်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့နည်းလမ်းမှာ ရှိပါတယ်။ ပန်းဖူးတစ်ခုမှ များစွာသော ပန်းတွေ ပွင့်ပြီး အစုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ စွမ်းအားတွေရှိတဲ့ ဆာကူရာက ကြည့်ရတာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။
အကြည့်မလွဲနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာက ဟီရိုးစခိပန်းခြံအပြင် ကျုံးရဲ့ ပန်းဖောင်။
ရှုခင်းတွေ ထုတ်ဖော်သူ၊ ကဗျာလက်ရွေးစင်ရဲ့ ( မသေခင်သွားချင်တယ် ! ကမ္ဘာရှုခင်းတွေ ) မှာ ရွေးချယ်ခံထားရပြီး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ ဒီရှုခင်းပါ။ ဓါတ်ပုံမှာ တွေ့ ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ များတယ် မဟုတ်လား။。
ဆာကူရာကော်ဇောလို့ လည်းခေါ်နိုင်တဲ့ ဒီရှုခင်းပါ။ ကျုံးက ဆာကူရာပွင့်ဖတ်တွေနဲ့ အပြည့်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ရှုခင်းက ( နောက်နှစ်လည်း လာဦးမယ် ) လို့ တွေးနိုင်လောက်အောင် လှပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ရဲ့ ဟီရိုးစခိဆာကူရာပွဲတော်က ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့ မှ မေလ ၆ရက်နေ့၁၆ ရက်ကြာ ကျင်းပပါတယ်။
သက်တမ်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး အပင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ စိုမဲအိယောရှိနိုဆာကူရာပန်းတွေ ပွင့်နေတဲ့ ဟရူးရန်းမန်းပန်းခြံတွင်းကို မုန့် ဆိုင်တန်းကို စားသုံးခံစားကြည့်ရင်း လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါနော်။
ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၄ ။ တိုင်းရှောခေတ် စိတ်ကူးယဉ်အပြည့်ရှိတဲ့ စတားဘတ်မှာ ကော်ဖီသောက်မယ်
ဟီရိုးစခိရဲတိုက်ရှေ့ မှာရှိတဲ့ စတားဘတ်ရဲ့ ( ကွန်းဆဲပုတိုစတိုး ) ။
ကွန်းဆဲပုတိုစတိုးဆိုတာက လက်ရှိ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၁၄ နေရာရှိတဲ့ အပြင်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှုင့် အတွင်းပြင်ဆင်မှုမှာ ထူးခြားချက်တွေရှိတဲ့ ဆိုင်တွေဖြစ်ပြီး အတွင်းမှာလည်း မှတ်တမ်းဝင်မရွေ့ မပြောင်းနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်နဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ ဒီနေရာအပါအဝင် ၃ ဆိုင်ဘဲရှိပါတယ်။
ဒီအဆောက်အဦးက ၁၉၁၇ ခုနှစ်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးရဲ့ အဆောင်အဖြစ် ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ သစ်သားအဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး ဂျပန် ဥရောပ ရောစပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းက ထူးခြားပါတယ်။
တိုင်းရှောခေတ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ဆိုင်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း အနည်းငယ် ကွဲပြားတဲ့ ကော်ဖီသောက်ချိန်ကို ကုန်ဆုံးမယ်။
【နေရာ 】အာအိုးမိရိခရိုင် ၊ ဟီရိုးစခိမြို့၊ ခါမိရှိရိုးယာနဲချော ၁ - ၁
【အလုပ်ချိန် 】၇း၀၀ မှ ၂၁း၀၀
【ပိတ်ရက် 】 ပုံမှန် မရှိ
ပျော်ရွှင်ခံစားနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၅ ။ ဆိုင်ရဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားရတဲ့ ပန်းသီးပိုင်းမုန့် ကို သွားစားမယ်။
ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားရတဲ့ ပန်းသီးကို အသုံးပြုထားတဲ့ မုန့် ဆိုင်တွေ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ ဟီရိုးစခိဖြစ်တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ပန်းသီးမုန့် က ဆိုင်ရဲ့ ထူးခြားမှုတွေ အပြည့်ရှိနေပါတယ်။ ပန်းသီးကုန်စည် ပိုင်းမုန့် စားစရာ စတဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ လှပတဲ့ မုန့် တွေ များစွာ ရှိတယ်။
▲ … ရဲ့ ပန်းသီးပိုင်းမုန့်( ၃၀၂ ယန်း ) ။ ရေခဲမုန့် နဲ့ တွဲဆက်ပြီး။
ဟီရိုးစခိမြို့တွင်းမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ပန်းသီးပိုင်းမုန့် ကို ၄၇ မျိုးစုစည်းထားတဲ့ လမ်းညွှန်မြေပုံလည်း ရှိပါတယ်။ မြေကို ကိုင်ပြီး စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပန်းသီးပိုင်းမုန့် ကို ရှာပြီး သွားစားကြည့်ကြမယ်။
( ပန်းသီးပိုင်းမုန့် မြေပုံက ဒီနေရာ )
ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း ၆ ။ ပန်းသီးယာခင်းတွေ လည်ပတ်ပြီး ပန်းသီးအရက်ကို မြည်းစမ်းကြည့်မယ်။
အမှတ်မထင်ဆိုပေမယ့် ပန်းသီးအရက်ကို သိကြလား ?
ဟီရိုးစခိရဲ့ နာမည်ကြီးထုတ်ကုန်လို့ ပြောရင် ပန်းသီးမဟုတ်လား။ ဒီလိုဆို ! ပန်းသီးအရက်ဆိုတာက အဲဒီပန်းသီးကို အချဉ်ဖောက်ပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပြင်သစ်မူရင်းဖြစ်တဲ့ အရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းသီးပင်တွေ ကြားမှာ ရှိတဲ့ အဖြူရောင်သုံးထောင့်အမိုးက ဟီရိုးစခိ ပန်းသီးအရက်အလုပ်ရုံ kimori ဖြစ်တယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ပန်းသီးစိုက်ပျိုးသူတွေက ကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့် ပန်းသီးအရက်ကို ပြုလုပ်နေပါတယ်။
ဆိုင်တွင်းက အေးဆေးထိုင်ဖို့ လုပ်ထားတဲ့ ပန်းသီးထိုင်ခုံနဲ့ ပန်းသီးသစ်ပင်ရဲ့ ထင်းကို အသုံးပြုထားတဲ့ မီးလင်းဖို စတဲ့ ရောက်တဲ့နေရာမှာ အနည်းငယ်ထူးခြားချက်တွေ ပြည့်နေပါတယ်။
ပန်းသီးအရက်ကို စမ်းသောက်ကြည့်ဖို့ က အဝသောက် ၃၀၀ ယန်းပါ။
နေရောင်ခြည်ကျရောက်နေတဲ့ ကိုင်းညွတ်ပြီး အသီးသီးနေတဲ့ ပန်းသီးပင်ကို ကြည့်ရှုရင်း အေးအေးဆေးဆေး အဝသောက်ကြမယ်။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းသီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရှာဖွေရင်း ဥယျာဉ်တွင်းက အပင်ပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ ပန်းသီးပင်တွေကို ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
【နေရာ 】ဟီရိုးစခိမြို့ ၊ မီဇုတိုမိတ အာဇတဲရဆာဝ ၅၂ - ၃ ဟီရိုးစခိမြို့ ပန်းသီးဥယျာဉ်တွင်
အထက်ဖော်ပြပါ ဟီရိုးစခိရဲ့ ပျော်ရွင်ခံစားနိုင်မယ့်နည်းလမ်း ၆ ကို ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် လျှောက်သွားရတာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဟီရိုးစခိဖြစ်တယ်။ ဆက်ဆက် ကင်မရာကို ယူလာပြီး လျှောက်သွားကြည့်ပါနော်။